တမန်တော်နူးဟ်(အ) သင်္ဘော တည်ဆောက် သည့် အကြောင်း | Danya Wadi
»အစ္စလာမ်ဘာသာ»တမန်တော်နူးဟ်(အ) သင်္ဘော တည်ဆောက် သည့် အကြောင်း
တမန်တော်နူးဟ်(အ) သင်္ဘော တည်ဆောက် သည့် အကြောင်း
Posted by danyawadi on November 21, 2015 in အစ္စလာမ်ဘာသာ, General
အောက်ကပုံက တမန်တော်နူးဟ်(အ)ရဲ့သင်္ဘော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ်နဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ပုံပါ…
တမန်တော်နူးဟ်(အ)ကအလ္လာဟ့်အမိန့်နဲ့သင်္ဘောတည်ဆောက်ဖို့လုပ်တော့ မိုအ်မင်န်အဖွားအိုက တမန်တော်နူးဟ်(အ)ကိုမေးတယ်…သင်ဘာလို့ဒီသင်္ဘောကိုဆောက်နေတာလဲ???..
တမန်တော်နူးဟ်(အ)ကဖြေတယ် အလွန်ပဲကြီးမားတဲ့ ရေမုန်တိုင်းကြီးလာဖို့ရှိတယ်…ထိုရေမုန်တိုင်းကြီးကြောင့် ကာဖိရ်တွေ အားလုံး ပျက်စီးသွားကြမယ်..မိုအ်မင်န်တွေက ဒီသင်္ဘောရဲ့အကြောင်းခံနဲ့ လွှတ်မြောက်ခွင့်ရလိမ့်မယ် ဆိုပြီးဖြေတယ်….အိုးတမန်တော် ရေမုန်တိုင်းလာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မကိုလည်းအကြောင်းကြားပြောပေးပါ..သို့မှသာကျွန်မလည်း ဒီသင်္ဘောနဲ့အတူလိုက်ပါလာရအောင်….အဖွားအိုရဲ့ တဲစုတ်လေးကလဲ မြို့ပြင်နဲ့နည်းနည်း အလှမ်းဝေး တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်…အလိုနဲ့ ရေမုန်တိုင်းကြီးကျေရာက်လာဖို့အချိန်နီးတော့ တမန်တော်နူးဟ်(အ)က တခြားသူတွေအားလုံးကို သင်္ဘောပေါ်မှာတက်ခိုင်းဖို့လု ပ်လိုက် တယ်…သို့ပေမယ့် အဖွားအိုကိုခေါ်ဖို့မေ့သွားတယ်…ဒီလိုနဲ့အလ္လာဟ့်ဖက်ကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရေမုန်တိုင်းကြီးကျရောက်လာတော့…ရှိသမျှကာဖိရ်တွေအားလုံးကသေကြေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြတယ်…အလ္လာဟ့်ရဲ့ဒီအဇားဗ်က ငြိမ်သက်သွားပြီးရေတွေကျသွားတဲ့အချိန် တမန်တော်နူးဟ်က သင်္ဘောပေါ်ကနေမိုအ်မင်န်တွေကို သင်္ဘောအောက်ကိုဆင်းခိုင်းတုန်းလေးပဲ ရှိသေးတယ်…အဖွားအိုကတမန်တော်နူးဟ်(အ)ရဲ့ထံကိကိုလာပြီးမေးတယ်…အိုးတမန်တော် ရေမုန်တိုင်းကြီးဘယ်တော့လာမှာလဲ??…ကျွန်မကသင်္ဘောပေါ်ဘယ်တော့တက်ရမလဲ ပြီးတော့ ရေမုန်တိုင်းဘယ်တော့လာမလဲဆိုတာကို နေ့တိုင်းစောင့်မျှော်နေတာ…တမန်တော်နူးဟ်(အ)က အံ့သြပြီးဖြေတယ်…ရေမုန်တိုင်းကြီးက လာပြီးသွားပါပြီ…ပြီးတော့ကာဖိရ်တွေအားလုံးပျက်စီးကြ ကုန်ပြီ…သင်္ဘောကိုအကြောင်းခံပြီး အလ္လာဟ်ကမိမိရဲ့မိုအ်မင်န်ဗန္ဒဟ်တွေကို ကယ်တင် လိုက် ပါပြီ…ဒါပေမယ့်အံ့သြဖို့ကောင်းတာက အဖွားအိုကဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်လွှတ်မြောက်သွား တာလဲ???ဆိုပြီးတမန်တော်နူးဟ်(အ)ကမေးတော့…အဖွားအိုကဖြေတယ်…ကောင်းပါပြီဒီလိုလား…ဘယ်အရှင်ကသင့်ကိုသင်္ဘောရဲ့အကြောင်းခံနဲ့ကယ်တင်ခဲ့သလဲ…အဲ့ဒီအရှင်ကပဲကျွန်မကိုလည်း ကျွန်မရဲ့စုတ်ပြတ်နေတဲ့ တဲစုတ်လေးကိုအကြောင်းခံပြီး ကယ်တင်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ အဖွားအိုကဖြေလိုက်ပါတယ်…
ဘယ်သူကအလ္လာဟ့်အတွက်ဖြစ်မလဲ အဲ့ဒီသူကို အလ္လာဟ်က အချိန်တိုင်းမှာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်…ဘာအကြောင်းခံမှမလိုပဲ အလ္လာဟ့်ဖက်ကအကူအညီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်….အလ္လာဟ်နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့တွေလည်း ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်…အလ္လာဟ်အစားပေးတော် မူပါစေ….s.j.h.khan
← ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းသည်ရခိုင်သမိုင်းဟု ၀န်ကြီး တစ်ဦး၏ ဖြေကြားချက် Video
အပျို ၃ မျိုးတဲ့ ဘာတွေလဲ ဖတ်ကြည့် ရအောင်။ →